Mpanamboatra fiambenana marani-tsaina izahay ary manome ny serivisy OEM sy ODM ho an'ny mpanjifany.
Ho an'ny entana mahazatra, ny MOQ anay dia singa 5 ho an'ny mpanjifa mizaha ny tsenan'izy ireo, ary ho an'ny entana ampanjifaina dia 1000 pcs ny MOQ (raha toa ka 10k, sdk 5k no ampanjifaina ny fampiharana).
Afaka mahazo santionany maimaimpoana ve aho?
Ho an'ny santionany maimaimpoana dia afaka mangataka ho anao izahay ary aorian'ny andoavanao sy hizahan-toetra ny santionanay, raha manafatra vokatra betsaka izahay, dia haverinay ny saram-bidinao avy amin'ny fandoavam-bola.
Ho an'ny baiko alibaba, azonao atao ny mandoa vola amin'ny alibaba amin'ny alàlan'ny varotra an-tserasera, raha tsy ivelan'ny Internet, azo zahana ny T / T, fametrahana 30% ary fifandanjana 70% alohan'ny fandefasana.
Raha misy santionany ananantsika ny ora fandefasana dia 1-3 andro, ary ho an'ny baiko kely ambanin'ny 500pcs, dia 3-7 andro, ary ny baiko famokarana betsaka dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 20 andro, miankina amin'ny habetsahan'ny baikonao izany.